Kaniisadii Masaajidka loo badalay ee Flen oo weeraro joogto ah lagu haayo | Somaliska
Kaniisadii Masaajidka loo badalay ee Flen oo weeraro joogto ah lagu haayo
Isbuucaan waxaa markii shanaad la weeraray masaajidka Flen Moske ee ku yaala magaalada Flen. Muaraayadaha masaajidka ayaa dhagaxaan lagu weeraray. Illaa iyo hadda lama garanayo cidii kadanbaysay dhibaatadaa. Masaajidka Flen ayaa horay u ahaan jiray goob kaniisad ah, iyadoo Muslimiinta ay iibsadeen sanadkii 2011 ka dibna ay u badaleen masaajid. Ma ahan markii ugu horeysay ee la weeraro Masaajidka.
Maamulka Masaajidka ayaa Muslimiinta ka codsaday in la caawiyo. Iyagoo sheegay in dagaal joogto ah lagu haayo masaajidka.
Dood wadaag ku saabsan mideynta reeraha Soomaalida oo ka dhacay Norrköping
arinta waa ina laga hor taga gacmaha lis qabsada
Qofkii doonaya in uu caawiyo masjidkaan dhibka badan lagu hayo, wuxuu wax u soo marin karaa
kontonummer. 825784234336701 Maamulaha masjidka Sh C/laahi Cusmaan tel 0735702292 ama maamule ku xigeenka Jaamac tel 0704895104.
asc waxan idin kula talin lahaa in masaajidka lagu xidho kaamirooyin siloo ogaado qofka dabiga galaya taas ayaa muhiim ah sidaas hadii lasameeyo waa la ogaan kara kadibna waa laqaban oo waa ladacwey karaa